Chii chinonzi quasar? Hunhu, nhoroondo uye kukosha | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 11/05/2021 10:03 | Meteorology
Tinoziva kuti zvakasikwa zvakakura uye panogona kunge paine zvinhu zvakawanda zvisingazivikanwe zvakaita senyeredzi dzinoreva muviri wedenga. Kune zvakare marudzi akasiyana ezvimwe zvinhu zveyeredzi izvo zvinogona kuwanikwa mudenga. Pakati pezvinhu zvese izvi zvemuchadenga tsvaga iyo quasar. Ndicho chinhu chekuongorora muchadenga chinofungidzirwa nehunyanzvi masayendisiti seimwe yenyeredzi dzakajeka kwazvo dziripo muchadenga. Izvo ndezve Roger Shiri inowana nzvimbo kure kure uye inokwanisa kuburitsa yakawandisa masimba esimba kuburikidza nemwaranzi yakafanana kuti ibudise nyeredzi.
Muchikamu chino tiri kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve quasar, hunhu hwayo uye kukosha kwayo.
2 Nhoroondo yequasar
3 Quasar Properties
4 Vanowanikwa kupi?
Quasars miviri yekudenga inofambiswa nemakomba matema anodakadza (mabhiriyoni enguva dzakakura kupfuura zuva redu). Dzino penya zvino penya zvekuti dzakapenya nyeredzi dzekare dzaive nadzo, uye zvinoshamisa kuti takangotanga kuzvinzwisisa hafu yezana ramakore rapfuura.
Masayendisiti anotenda kuti izvi zviratidzo zvine simba zvinobva mugalactic nucleus, iyo ine inopfuura iyo inomiririra gwara. Muchokwadi, isu tinongowana chete maquasar mumagaraxies ane supermassive matema maburi (kwete kunyangwe mune ese matema maburi magaraxies). Kana zvinhu zvekudenga zvanyatsoswedera, zvinogadzira dhisiki rekuwedzera iro rinopisa kusvika kumamirioni emadhigiri uye rinoburitsa mwaranzi yakawanda.
Iyo magineti nharaunda yakatenderedza gomba dema inokonzeresa jets yesimba inoumbwa munzira dzakasiyana (zvakafanana nezvinoitika nesimba repulsar, iro rinobudawo munzira mbiri dzakatarisana), iyo inofamba nemuchadenga kwemamirioni emakore. Kunyangwe chiedza chisingakwanise kupukunyuka kubva mugomba dema uye guruva negasi zvinowira mariri, zvimwe zvidimbu zvinomhanyisa zvakanyanya kusvika pakumhanya kwechiedza nekuda kweiyi magineti.
Iye zvino tava kuzotarisa pane hunhu hweiyo quasar:
Iyo inodya iro simba rinogadzirwa neanosangana nechisimba pakati pegalactic nyaya
Inokura pakati peyeredzi nyowani uye yozove inopenya kwazvo muviri wedenga. Inogona kunyange kuona mabhiriyoni emakore akareruka.
Chiedza chayo chinokonzerwa negomba hombe dema riri pakati peMilky Way.
Iyo gaseous nyaya yakatenderedza yakakwanisa kusvika kwakanyanya kwazvo tembiricha. Paive nekukakavara kukuru uye mhirizhonga mairi.
Ivo vane yakakwira mwero yemwaranzi.
Iwo mamirioni enguva anopenya kupfuura nyeredzi.
Tinofanira kudzokera kumashure kuma1930, apo Karl Jansky (mumwe wemapiyona ezvemazuva ano redhiyo nyeredzi) paakaona kuti nyonganiso dzerunhare muAtlantic dzakauya, zvakanyanya kana zvishoma, kubva kuMilky Way. Muma1950, vazivi venyeredzi vaitove kushandisa maredhiyo materesikopu kuongorora denga uye kushandisa zvavakawana kuzvienzanisa nemifananidzo yedenga.
Naizvozvo, ivo vakaona kuti zvimwe zviwanikwa zvidiki zvekubuda zvaive zvisina zviyero zvakaenzana zvekubuda munzvimbo inoonekera yechiedza. Mune mamwe mazwi, vakawana sosi yeredhiyo muchiratidzo cheredhiyo, asi havana kuwana nyeredzi kana chero chinhu chinoratidzika kunge chinoburitsa simba iri mumufananidzo wedenga. Nyanzvi dzenyeredzi dzinodaidza zvinhu izvi kuti "magetsi emagetsi ekuona" kana "quasars." Mushure memakore ekutsvagisa (uye zvinogona kutokwanisika kujekesa mukana wekuti ivo ndeumwe rudzi rwekusvirwa kubva kune imwe nyika budiriro), vanhu vakaona kuti ivo zvimedu chaizvo izvo zvinomhanyisa padyo nekumhanya kwechiedza.
Iyo sosi yesimba inoitisa kupenya mwenje wakakura, igomba rakakura kwazvo dema uye choto chegesi unopenya.
Iyo quasar ine yakawandisa redshift uye ivo vari kure nepasi. Kunyangwe vachiita sevanofenda kana vachionekwa kuburikidza neteresikopu, ivo vari kure kure, zvichivaita zvinhu zvinojeka kupfuura zvese muchadenga. Ivo vanogona kushandura kubwinya kwavo munguva dzakasiyana dzenguva. Mamwe acho anogona zvakare kushandura kupenya mumwedzi, vhiki, mazuva kana maawa. Hupamhi hwe quasar inoshanduka pane imwe nguva yemavhiki mashoma haigone kupfuura mashoma masvondo mashoma.
Iyo quasar ine zvakare akawanda ehumwe hunhu semagaraxies anoshanda.Radiation haizi yekupisa mwaranzi uye yakave ichionekwa kuburikidza nejeti uye lobes (senge redhiyo magalakisi). Quasars inogona kucherechedzwa munzvimbo zhinji dzemagetsi emagetsi, senge radio frequency, infrared, inoonekwa mwenje, ultraviolet, X-rays uye kunyangwe gamma mwaranzi. Mazhinji acho anopenya muultraviolet color reference furemu padhuze ne1216Å Lyman-alpha hydrogen emission line, asi nekuda kwekutsvuka kwavo, iyo yakacherechedzwa mwenje nzvimbo padyo infrared inosvika 9000Å.
Kukosha kwekutsvaga nekudzidza iyo quasar ndeyekuti masayendisiti anogona kuishandisa kuti vawane ruzivo rwakakosha pamaitiro ekugadzira iyo yekutanga supermassive dema gomba uye gwara rayo.
Mazhinji emakowasi atinowana mabhiriyoni emakore echiedza kubva kwatiri. Sezvo kunyangwe ichifamba nekumhanya kwechiedza, aya maranzi anotora nguva yakareba kuti apararire. Kudzidza zvinhu izvi zvakangofanana nekushandisa muchina wenguva, kuti tikwanise kuona mitumbi yekudenga zviuru zvemakore apfuura, sekunge apo mwenje wakapukunyuka kubva ipapo. Mamirioni emakore. Pamakesi anodarika zviuru zviviri anozivikanwa, mazhinji aivapo mumatanho ekutanga emakwara enyeredzi. Iyo Milky Way inogona kunge yaipembererwa mumazuva ekutanga uye yakaramba yakanyarara kubva ipapo.
Quasars inoburitsa kusvika kumatirioni volts esimba, ichipfuura mwenje wese unounganidzwa nenyeredzi dzese muMilky Way. Ndidzo zvinhu zvinopenya pane zvakasikwa uye simba rayo rinovhenekera kakapetwa kagumi kusvika pa10 pane iyo yeMilky Way. Ivo havasi ivo vega zvinhu zvine hunhu uhu, muchokwadi ivo vari chikamu cheboka remitumbi yekudenga inonzi inoshanda galactic nuclei, iyo inosanganisirawo magamba enyeredzi aSeifert nemitumbi yekudenga.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve quasar uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Quasar: hunhu uye zvivakwa